မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၁၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၁၁)
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၁၁)
Posted by aye.kk on Jun 22, 2012 in My Dear Diary | 17 comments
ကျ မ အား နှုတ် ဆက် ပြီး ပြန် သွား သည့် ……….
ဦး ၏ နောက် ကျော ပြင် ကို ကြည့် ပြီး ၊ ရင် ထဲ တွင် ဟာ တာ တာ နှင့် ကျန် ခဲ့ ပါ သည် ။
ဒိုင် ယာ ယီ စာ အုပ် က ဦး နှင့် ကျ မ ကို လုံး ဝ ပြီး ဆုံး သွား စေ နိုင် သည် ဟု လည်း ထင် မိ ပါ သည် ။
နောက် ဆုံး တွေ့ဆုံ ခြင်းနေ့တ နေ ့လည်း ဖြစ် မည် ဟု စိတ် ထဲ တွေး မိ သော အ ခါ ၊ နာ ကျင် မှု ဝေ ဒ နာ များ ၏ ထိုး နှက် ခြင်း ကို တစ် ပြုင် တည်း ခံ စား နေ ရ မိ ပါ သည် ။
မ ပြီး ဆုံး သေး သည့် အ တိတ် ပန်း ချီ ကား ချပ် တ ခု ၊ အ လွမ်း များ နှင့် အ ဖော် ပြု လျှက် အ ပြီး အ ဆုံး သတ် သွား ခဲ့ ပါ သည် ။ တ သက် လုံး လည်း နာ နာ ကျင် ကျင် အ လွမ်း များ ကို ရင် ထဲ သယ် ဆောင် ခံ စား ပြီး နေ သွား ရ မည့် အ လုပ် ကို ကျ မ ကိုယ် ၌ က ရွေး ချယ် ခဲ့ မိ ခြင်း ဖြစ် ပေ သည် ။ သံ ယော ဇဉ် ရှိ ပြီး မှ ခွဲ ခွာ ရ သည့် အ တွက် လွန် စွာ လည်း စိတ် ထိ ခိုက် မိ ခဲ့ ပါ သည် ။
ဒိုင် ယာ ယီ ကို ဦး အ မှန် တ ကယ် ဖတ် ကြည့် မိ မည် ဆို ပါ က ၊ ဦး စိတ် ထိ ခိုက် ခံ စား သွား ရ မှာ ကို ပြေး ကြည့် စ ရာ မ လို တွေး ကြည့် ယုံ မျှ နှင့် သိ ပါ သည် ။ မ လျှော့ သော ဇွဲ ၊ မ လျှော့ သော မေတ္တာ က အောင် မြင် မှု ကို ရ ယူ သွား နိုင် ကြောင်း ခံ စား သိ မြင် လာ နိုင် မည် ဟု လည်း ကျ မ မှ ယုံ ကြည် မိ ပါ သည် ။
ဦး ၏ ညာ လက် ဖ ဝါး ပြင် တွင် ပါ ရှိ သည့် အ ရံ နှ လုံး လမ်း ကြောင်း က ၊ ပ ထ မ ပင် မ လမ်း ကြောင်း လို အ ချစ် မေ တ္တာ စိတ် က ၊ ထပ် တူ ထပ် မျှ မ ကျ သည် ကို ၊ ဦး ကိုယ် တိုင် သိ ရှိ မည် ဟု လည်း ကျ မ မှ ထင် မြင် နေ မိ ပါ သည် ။ ဒါ ကြောင့် သာ ညီ လေး လို နေ ထိုင် ဝတ် ဆင် ပြီး အ တူ တ ကွ နေ ထိုင် သွား ချင် သည် ဟု ဆို သည့် စ ကား က ရင် ထဲ က မ ပါ ပဲ ထုတ် ဖော် ဖွင့် ဟ နိုင် ဖို့မ လွယ် ကူ ပါ ။ ပ ထ မ လမ်း ကြောင်း ထက် အား ဖျော့ ကာ မှေး မှိန် နေ ခြင်း ဖြစ် ၍ ထို သို့သော သံ ယော ဇဉ် မေ တ္တာ မျိုး ဖြင့် တောင်း ဆို မှု တ ခု ဖြစ် သည် ကို ကျ မ မှ ခံ စား နား လည် မိ ပါ သည် ။
စ ကား တစ် ခွန်း ကို အ လေး နက် ထား သူ ၊ တန် ဖိုး ထား သူ ဆို လျှင် ၊ အ ကျ ကောက် ပြီး အ ဓိ ပ္ပါ ယ် တစ် မျိူး သက် ရောက် ခါ အ ထင် လွဲ မှား သွား စေ နိုင် ပါ သည် ။ ထို စ ကား ပြော ချိန် က ဦး ကို စိတ် ဆိုး မိ ပါ သည် ။ ကျ မ ၏ အုံ ပုံး စိတ် ( အ ငုံ ့စိတ် ) ၊ အ ရှိုက် မိ စေ သွား ခဲ့ သ ဖြင့် လည်း ရှက် စိတ် ဖြင့် မ ရ မ က (မ ပြော မ ချင်း ) ဘာ လို့အဲ သည် လို ပြော ရ တာ လည်း ဟု မေး မိ ခဲ့ ရ ခြင်း ပဲ ဖြစ် ပါ သည် ။
အ သိ စိတ် နှင့် မ သိ စိတ် တို့လွန် ဆွဲ လျှက် မေး မိ ပါ မှ ငါး ပါး မှောက် ခဲ့ ရ သူ က ကျ မ ပင် ။ အ ချစ် တော် ထား ဘူး ကာ ဘ ဝ ၏ အ လွဲ အ မှား များ ဖြင့် ၊ ဆုံး ဖြတ် ချက် မှား ယွင်း ခါ ၊ ပ ညာ တစ် ပိုင်း စ ဖြစ် သွား ရ ခဲ့ ခြင်း ကို ဦး က တိ တိ ကျ ကျ သိ ထား နေ ခြင်း မှာ ၊ အ ဖေ ကိုယ် ၌ က ထုတ် ဖော် ပြော ပြ ထား ၍ သာ ဖြစ် မ ည် ဟု ထင် ပါ သည် ။
ညီ လေး လို လည်း နေ ချင် သည် ဟု ဆို ပါ လျှင် ၊ အံ့ ဩ ထူး ဆန်း စွာ မိန်း ခ လေး သ ဘာ ဝ တ ရား စိတ် တို့ဖြစ် ပေါ် ခံ စား လာ ရ သည် မှာ လည်း ဘာ မျှ မ ကြာ သေး ပါ ။ ယ ခင် လို စိတ် နှင့် ဆို က ဦး နှင့် အ တူ တူ နေ ထိုင် ဘို့ရုူး သွတ် မိ မှာ အ မှန် ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။
အ သက် တ မျှ တန် ဘိုး ထား ခါ ၊ ချစ် မိ ခဲ့ ရ သော သူ ငယ် ချင်း (ဝါ) အ ချစ် တော် တ နည်း ပြော ရ ပါ လျှင် (လိင် တူ အ ချစ် ) ဇတ် လမ်း က ပြီး ဆုံး သွား ခဲ့ ပြီး ၊ အ ချိန် အ တော် အ တန် ကြာ စိတ် လေ ခဲ့ မိ မှု များ က လည်း ရှက် စ ရာ ကောင်း လွန်း လှသည့် ၊ ခ လေး ဘ ဝ က အ တိတ် တ ခု ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။
ဒါ ကြောင့် လည်း အစ် မ ကြီး ကျယ် က ကျ မ ၏ လက္ခ ဏာ အား ကြည့် မြင် ပြီး ထူး ဆန်း သည် ။ နှ လုံး လမ်း ကြောင်း (ဝါ) အ ချစ် မေ တ္တာ လမ်း ကြောင်း က ပုံ မှန် မ ဟုတ် ပဲ ၊ တ နင်း င်္ဂ နွေ ဂြိုလ် ခုံ အောက် ပြတ် ပြီး နှစ် ကြောင်း ဟ လျှက် ၊ တစ် ကြောင်း မှာ မှေး မှိန် ဖျော့ လျှက် နှစ် ကြောင်း ပြိုင် လျှက် ရှိ နေ သ လို ဖြစ် ခြင်း မှာ ၊ စိတ် ခံ စား မှု နှစ် မျိုး ဖြစ် ပေါ် နေ သည် က ဦး နှင့် ဆင် တူ နေ သည် ဟု ပြော ပါ သည် ။
ကျ မ အား လည်း အ ချစ် မေ တ္တာ ရေး တွင် ၊ ကျ မ အား သေ လောက် အောင် ချစ် သည့် သူ နှင့် မည် သည့် နည်း နှင့် မျှ ဖူး စာ ဆုံ မည့် ကံ အ ခွင့် အ ရေး မ ပေါ် နိုင် ဟု သူ ၏ ထင် မြင် ချက် ဟော ကိန်း တ ခု အား ထုတ် ဖော် ပြော ပြ ခဲ့ ဘူး ပါ သည် ။ အ ချစ် ရေး တွင် မ အောင် မြင် ၊ ရှုံး နိမ့် ပျက် စီး ရ သော လ က္ခ ဏာ ရှင် သာ ဖြစ် သည် ဟု အစ် မ ကြီး ကျယ် က ပြော ပြ ပါ သည် ။ အ တိတ် က ပြု ခဲ့ သည့် ကံ ကြ မ္မာ ဝဋ် ကျွေး များ ပင် ဖြစ် သည် ဟု လည်း အစ် မ ကြီး ကျယ် က ဆို ပါ သည် ။
ဦး ပြန် လာ ခါ နီး အ လို စာ တစ် စောင် ရေး ထဲ့ လာ ပါ သည် ။
စာ ပါ အ ကြောင်း အ ရာ များ က……….
ကောင် လေး ၏ အ ချစ် မေတ္တာ တ ရား က ဦး ထက် သာ လွန် လျှက် ရှိ နေ သ ဖြင့် ၊ ပြန် ချစ် သင့် ကြောင်း…
သ္မီး မှ မ ရက် စက် သင့် ကြောင်း ….
မိ ဘ များ က သ ဘော မ တူ လျှင် ၊ သ္မီး ၏ မိ ဘ များ အား နား ချ ပေး မည် ဖြစ် ကြောင်း …
သ္မီး သ ဘော တူ ပါ က ၊ နယ် သို့ဦး ကိုယ် တိုင် လိုက် ပြော ပေး မည် ဖြစ် ကြောင်း ၊ ရေး သား လာ ပါ သည်။
ဦး မ ကြာ ခင် ပြန် လာ မည် ၊ လာ တွေ့ပြီး ဆွေး နွေး မည် ဟု ဆို ပါ သည်။
ဆွေး နွေး မည် ဆို သည့် ကိ စ္စ က မ ဖြစ် နိုင် မှန်း၊ ကျ မ သိ နေ ပါ သည် ။ ကောင် လေး က လက် ထပ် တောင်း ရမ်း ယူ နိုင် သည့် အ ခြေ အ နေ မ ရှိ ပဲ ၊ ဘယ် နည်း နဲ့မျှ မိ ဘ တွေ က သ ဘော တူ နိုင် မည် မ ဟုတ် ပါ ။ ကျ မ က လည်း အ မှန် တ ကယ် ချစ် မြတ် နိုး မှု နှင့် အ တူ မိ ဘ တွေ သ ဘော တူ လာ သည် အ ထိ စောင့် နိုင် သည့် သူ မျိုး ဖြစ် ပါ သည် ။
ကိုယ် က လည်း ချစ် ပြီး နှစ် ဖက် မိ ဘ တွေ သ ဘော တူ ပြီး တင့် တယ် စွာ လက် ထပ် ချင် သည် က ကျ မ ၏ ရင် ထဲ က ဆန္ဒ အ မှန် သာ ဖြစ် ပါ သည် ။
လက် တွေ့မ ကျ နိုင် သေး မှု အ ပေါ် ဦး က အ ထင် မြင် လွဲ ကောင်း လွဲ နိုင် ပါ သည် ။ ကျ မ ရင် ထဲ က ဆန္ဒ အ မှန် ၊ မ အောင် မြင် သေး သည့် အ ပေါ် မည် သည့် နည်း နှင့် မျှ ထုတ် ဖော် ပြော ဆို ပြ ၍ မ ဖြစ် နိုင် ပါ ။
ပို ဆိုး သည် က ကျ မ ကိုယ် ၌ က အ မှန် တယ် ချစ် နှစ် သက် မှု ထက် ၊ ဒိုင် ယာ ယီ ကို ဖတ် ပြီး နှ လုံး သား ဝေ ဒ နာ ဒု က္ခ ဆင်း ရဲ မှု ကို သိ မြင် ခံ စား မိ ခဲ့ ရ သ ဖြင့် ၊ မ ခံ စား နိုင် ပါ ဘဲ သ နား ဂ ရု ဏာ သက် ကာ ချစ် မိ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည် ။ သ နား ပြီး ချစ် သည့် သ နား ချစ် ဟု လည်း ကိုယ့် ကို ထင် မြင် ခဲ့ ပါ သည် ။
ဦး ပြန် ရောက် လာ ပြီး ကျ မ အား လာ တွေ့ခဲ့ ပါ သည် ။
အပိုင်း1 မှ 11 အထိ ကော်ပီကူးပြီး
နိုဗွီဂလေး အသက်အရွယ်နဲ့ ဒီလိုစာမျိုး ဖတ်ရဘူးလေ…။ လူဂျီးတွေရဲ့ကိစ္စ မသိဂျင်ဇမ်းဗာနဲ့..။
အင်း ဒီလိုဆိုတော့လဲ အူးလေးဘဝက မုန်းစရာမကောင်းတော့ဘူး။ သနားစရာဂျီး။
အပိုင်း ၁၂ မှာ အဆုံးသတ်မယ် ဆိုတော့ အလွမ်း ဇတ်နဲ့ သိမ်းရတော့မှာပေါ့။
ဇတ်သိမ်းပြီးရင်တော့ နှစ်ပါးသွား တခန်းရပ် ဇတ်လမ်းလေးတွေ လာပါအုန်း။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြေကွဲနေတာတွေ အမောပြေသွားအောင်လို့.. ဟိဟိ..
ကူးထားပြီးပြန်ပြန်ဖတ်နေပါတယ်။ အင်မတန်ကို စိတ်ဝင်စားကြေကွဲစရာဇာတ်လမ်းလေးမို့ ရုပ်ရှင်တောင်ရိုင်ကလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
အန်တီအေးရေ…………ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ်သိလား။ လက္ခဏာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဗဟုသုတတွေရလို့ ကူူးထားပါကြောင်း………
မေးစရာတစ်ခုရှိလို့ပါ အန်တီအေးရေ……….. သမီးရဲ့ ဘယ်ဘက်လက်မှာပါ။ လက်ညှိုးနဲ့ လက်မကြား ကနေ မျဉ်းတစ်ခုထွက်ပြီး လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကြားမှာဆုံးသွားတယ်။ (အမှန်တော့ ဘယ်ကအစ ဘယ်ကအဆုံးလို့တော့ ပြောလို့မရဘူး။) လက်ညှိုး ကို ဝှိုက်ထားသလိုဖြစ်နေတာ ဘာသဘောလဲဟင်။ တစ်ဖက်တည်းပဲဖြစ်နေတာ။ ညာဘက်မှာက မရှိဘူး။ ပြောပြပေးပါနော်။
ဪ……..ဒီလိုလား။ ဟူး……………… တော်သေးတာပေါ့ အန်တီအေးရယ်။ ဒါနဲ့ နိုင်ငံခြားသွားရမယ်လို့ ပြောတာ ဘယ်လိုမျိုးကြောင့်လဲဟင် အန်တီအေး။ ကြားဖူးတာက ငါးကြင်းကွက်လိုမျိုးပါရင် သွားရတယ်ဆို။ ဟုတ်လားဟင်။
ဇာတ်လမ်းလေးက စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ အချစ်ရေးကို လက္ခဏာမှာပေါ်နေတာလေးကလည်း အဆန်းပဲ။
သိနေတော့လည်း ဆင်ခြင်နိုင်တာပေါ့ အန်တီအေးရယ်။
ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေလိုဆိုရင် ဇာတ်လမ်းက အပိုင်း ၅ဝ လောက်တောင် ဆက်ရေးရင်ရနိုင်မယ့်ပုံပဲ။
ဇာတ်သိမ်းကို ရှာနေတာ အခုထိ မတင်သေးဘူးပေါ့နော်….
ဒါဆို ညနေကျမှပဲ ပြန်လာလာချင်း ရှာဖတ်ရတော့မယ်…
တကယ်လို့ ”ဦး” က ”သမီး” ရဲ့ ရင်ထဲက ကောင်လေးနဲ့ကြားဝင်စေ့ပေးလို့
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ”ဦး” နဲ့ ”သမီး” အပြန်အလှန်ထားကြတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေကနေ
ဦးအနေနဲ့ သူ့လက္ခဏာအတိုင်း သမီးအပေါ် ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ နောက်ထပ်
ချဉ်းကပ်-ချစ်ခွင့်ပန်ပြီး တူနှစ်ကိုယ်နီးစပ်ကြဖို့ အခွင့်အရေး ရနိုင်ကောင်းရဲ့နော်….
နှစ်ခါ ချစ်ကံခေသူ “ဦး” ကို သနားသွားလို့ ”ဦးနဲ့သမီး” အဆုံးသတ်လေး လှသွားစေချင်မိတယ်…း)…
အန်တီအေးရေ …. ဦးဆိုတဲ့ လူကလေ … သူရဲ့ အနေထားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊အသက်ရွယ်တွေအရ မာနလေးတောင် နည်းနည်းမှ မရှိတော့ဘူးလားနော် … ။
အစ်မကြီးယောကျာ်းယူသွားတာတောင် ၊ ညီမဖြစ်သူကို ဖွင့်ပြောရဲတဲ့ သတိ္တ၊ အိမ်ဝင်ထွက်ရဲတဲ့ သတိ္တ ၊ မိဘတွေကို နားပါဖောက်ရဲတဲ့ သတိ္တ … ဒါတွေရှိခဲ့တယ် … ။ အခုလည်းကြည့် ကောင်လေးနဲ့ အိမ်က သဘောမတူလျှင် သူက လိုက်ပြောပေးဦးမယ်တဲ့ …. ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးတင်းပြီးလိုက်ပြောမှာပါလိမ့်